Luluphi ulwalathiso olulandelwa kuyilo lwegraphic? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inkqubela phambili kwezetekhnoloji inika indawo yokuqala kuyo iindlela ezintsha kwihlabathi ledijithali kwaye kukuhamba kwexesha, siyibonile le nkqubo. Siye sabona indlela iinkalo zolwazi Baqhubela phambili njengoko itekhnoloji ivula intsimi kunye nomhlaba kubo. Umzekelo woku inokuba impumelelo yonxibelelwano okanye ukwenziwa kwezinto ngobuxhakaxhaka bokuncokola, kuxhaswa yinkqubela phambili enkulu yomnxeba kunye ne-Intanethi, ukuphuhlisa amaqonga ahambelana nezi nethiwekhi zintsha zentlalo.
Imalunga noku Impucuko eya isanda ngokwanda, apho kuya kusiba lula ngakumbi ukwenza imisebenzi yethu kunye nokunxibelelana ngombulelo kuphuhliso lweetekhnoloji zonxibelelwano.
1 Luluphi ulwalathiso olulandelwa kuyilo lwegraphic?
2 Kodwa asithethi ntoni kuyilo lwewebhu?
Ngale ndlela, inqaku lanamhlanje liza kuphakamisa umbuzo:Yiya kweliphi icala uyilo lwegraphic??
Kunokuba nzima kakhulu ukuphendula lo mbuzo kwaye kule mihla i iindlela ezintsha nezingafaniyo Kwaye xa izicelo zisanda, akukho ngqiqweni ukuqikelela indawo yolwazi. Ke mhlawumbi indawo apho sinokuvavanya khona ngokunokwenzeka kuyilo lwegraphic, kuba ukuyila inokuba yeyona ndlela ikhoyo ngoku yedijithali, xa unikwa Inani elikhulu loyilo ukuba ezi zinto ekugqibeleni ziyaxatyiswa.
Ngokusekwe koku, sinokuqikelela ukuba mhlawumbi uyilo lwegraphic ophetheyo ekubumbeni la maqonga eziza kuthi ekugqibeleni zivelise imifuziselo yemifuziselo yeenkampani zabo. Ukufezekisa entsha ubuchule bokuyila kwidijithali Inokuba lelinye inqaku ekufuneka liqwalaselwe kwinkqubela phambili enokubakho kunye nolwalathiso loyilo lwegraphic. Ke, ukuqhubela phambili kwamaqonga omnxeba kuya kusivumela ukuba sibe nesoftware eya kuba nzima ngakumbi kwaye mhlawumbi ikhaphukhaphu, ukuze sikwazi yenza imisebenzi yoyilo lwethu kwizixhobo eziphathwayo, ukuququzelela umsebenzi wethu kwaye ngaxeshanye, ngaphandle kokuphulukana nobunzima kunye namandla okuphuhlisa iiprojekthi zoluhlu olufanayo njengayo nayiphi na isoftware eqhelekileyo neyangoku.
Kodwa asithethi ntoni kuyilo lwewebhu?
Oku kubizwa ngokuba luyilo lwewebhu iindlela zoyilo Uxanduva lokwandiswa kweemodeli kumaqonga ewebhu, ukuphendula kwiimodeli ezifanelekileyo nezibonakalayo zentengiso yabatyeleli.
Omnye umsebenzi ukwangqinelana ukulungelelaniswa kweemodeli zeqonga lewebhu kwezinye izixhobo ngaphandle kweekhompyuter. Lo nto, Uyilo ludlala indima ebalulekileyo kulwakhiwo lolwazi oluthiwe thaca kwiwebhu. Kubonakala ngathi imeko yexesha elizayo kuyilo lwegraphic iya kuba nenxaxheba enkulu kuphuhliso lolungelelwaniso lwezixhobo ezitsha zomzuzu, ukuphuhlisa amandla emiboniso entsha kubasebenzisi benethiwekhi.
Kungoko ke malunga nophuhliso loyilo lwewebhu, apho kuqikelelwa ukuba mhlawumbi imizobo yoyilo lwegraphic ijolise kule ndawo Ulwazi, ke ngoko, ukulungelelaniswa kwewebhu kunye namaqonga ziya kuba ziintsingiselo kunye nokufika kuyilo lwegraphic ngaphakathi kwendawo yedijithali. Isandla kunye netekhnoloji, kungathenjwa ukuba uyilo lwesoftware entsha yokupapasha iya kuvumela abayili ukuba basebenzise ulwazi lwabo kuphuhliso lwezi ndawo.
Yiyo loo nto uyilo lwegraphic, njengemimandla emininzi yolwazi, iya kuthi icinge utshintsho oluninzi kule minyaka imbalwa izayo.
Mhlawumbi kunomdla ukucamngca zakuba yintoni ezi nguqu, kuba kuzo zonke ezi zinto, siya kuba ngabo baya kufunda ukuhlala nezi zinto zintsha zoyilo lwegraphic. Inkqubo ye- Itekhnoloji kunye nehlabathi ledijithali Ekugqibeleni iya kuba yenye yezona mpembelelo zibalulekileyo kuphuhliso loyilo, ke ngoko, kufuneka siqhubeke ngokubeka iliso kumcimbi.
Ku malunga notshintsho olufihliweyo kwixesha elizayo kunye notshintsho olunokwenzeka thatha ikhosi eyahlukileyo ngokupheleleyo kule nto uyiyoKe ngoko, uyilo lwegraphic inokuba yinto eyahluke kakhulu ngomso kule nto uyiyo namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Luluphi ulwalathiso olulandelwa kuyilo lwegraphic?
Kwahlukile, ukuba awunalo ulwazi lwewebhu kunye nolwakhiwo lwe-e-pub, inkqubo ye-app, uyilo lwe-UX, uyilo lwe-UI, intengiso yedijithali, umphathi woluntu kunye ne-SEO, u-google uhlala ngcono kangangoko unakho kuyilo lokuprinta okanye uzinikele ukwenza umzekeliso Imidlalo yevidiyo, imveliso yokufota i-e-commerce kunye nefashoni, ukuhlela ividiyo, uyilo lwe-3D okanye ukuphuhlisa ubuchule obunentengiso yesicelo seshishini kunye nokukhula kwengqesho.
Ukuhlala rhoqo ukwahlula isikhumba kunye ne-adobe Photoshop